Habeenada Filimka Dutchtown • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Habeenada Filimka Dutchtown
DT2 • Downtown Dutchtown waxay martigelisaa Habeennada Filimka saaxiibtinimada leh ee Marquette Park inta lagu jiro xagaaga. Adiga, qoyskaaga, deriskaaga, iyo qof kasta oo kale ayaa lagu casuumay! Dhacdooyinkan ayaa kala ah free bulshada.
Waxaan rajeyneynaa in sanadka 2021-ka, aafada cudurka laga gudbi doono waxaanna awoodi doonnaa inaan si dhow isugu soo ururno deriskeena markale sidii caadiga ahayd. Weli waan xulaynaa filimada, laakiin waxaad ku qori kartaa taariikhaha taariikheed:
Waxaan gacanta ku haynaa gawaarida xamuulka qaada iyo ururada bulshada oo bilaabmi doona 7:30 pm, filimkuna wuu socon doonaa isla marka uu mugdiga galo.
Caawiye Naadiyada Filimka Dutchtown
Marnaba ma ahan goor hore in aad na weydiiso waxa ku saabsan kafaalo qaadka! Waxaan ku siineynaa qabanqaabinno lagu daro magacaaga ama astaantaada waxyaabaha xayeysiinta ah, waxaan sidoo kale soo bandhigi karnaa fiidiyahaaga inta lagu jiro "horudhaca" filimka kahor. Nagala soo xiriir si looga wada hadlo xulashooyinka kafaalaqaadka.
Habeennadii Filimadii La Soo Dhaafay
DT2 iyo Allies of Marquette Park waxay martigeliyeen taxanayaashoodii ugu horeeyay ee dhacdooyinka filimka ee Marquette Park xagaagii 2019. Dutchtown Night Night waxay sii socdeen 2020, iyagoo u fidinaya madadaalo saaxiibtinimo qoys ahaaneed iyo mid bulsho ahaanba bulshada Dutchtown intii lagu jiray COVID-19 faafa.
Habeenada Filimka 2019
Habeenkii Filimka Dhalinyarada: Black Panther
Habeenkeenii filimka ugu horeeyay ee Marquette Park wuxuu ahaa guul weyn! In ka badan 100 deris ayaa u soo daawasho tagay Marvel Black Panther shaashadda weyn, iyo tobanaan carruur ah ayaa ku raaxeystay biisaska bilaashka ah, saloolka, iyo Ted Drewes Frozen Custard.
Lacag Uruurin Filim Muuqaal ah: Baafin
Waxaa laga yaabaa inay ku da'day Roobkeennii Filim-uruurintii Filimka, laakiin deeq-bixiyeyaashu weli waxay sameeyeen ballaadhin ballaaran oo ka badan $ 7,000 si loogu hagaajiyo barkadda! Akhri dhammaan wixii ku saabsan halkan.
Filimka Quusitaanka: Moana
Barxadda barkadda ee Disney Moana Ogosto 10, 2019 dad aad u tiro badan ayaa isugu soo baxay barkadda Marquette Park si loogu dabaasho iyo madadaalo xilli dambe ah.
Habeenada Filimka 2020
Taxanaha Filimka Xagaaga ee Downtown Dutchtown 2020 ayaa kafaala qaaday DT2 • Downtown Dutchtown, Degmada Horumarinta Bulshada ee Dutchtown, Shirkadda Koonfurta ee Dutchtown, Gabdhaha Gene Slay iyo Naadiga Wiilasha ee St., Hoyga loogu talagalay Aadanaha St. Louis, Kooxda Horumarinta Lutheran, Makhaayada Crusoe Asalka ah, St. Anthony ee Padua, Thomas Dunn Xarunta Waxbarshada, Iyo Xaafadda Tower Grove Neighborhoods Hay'adda Horumarinta Bulshada
Filim Wada-Filim ah: Maalinta Xorriyadda
DT2 iyo Hoyga loogu talagalay Aadanaha St. Louis martigelisay filimkeenii ugu horreeyay ee wadista gaariga 26-kii Juun, 2020.
In ka badan 60 gawaari ayaa kaqeybgalay baabuur wadista, oo leh Maalinta Xornimada oo laga qorsheeyay dhinaca dhismaha Habitat. Filimka ka sokoow, munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay gawaarida cuntada xamuulka, macluumaadka bulshada, iyo hordhacayaga Dutchtown Proud video. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Filimka Dutchtown Drive-In.
Habeenkii Filimka Marquette Park: Basaasiin isqariyey
Bishii Luulyo 25th, 22-lugood oo buufin ah ayaa ku soo laabtay buurta horteeda Marquette Park Field House oo loogu talagalay Habeen Filim ah oo ay kujiraan xiisaha xiisaha leh Basaasnimo ku dhex jira. Waxaan sidoo kale haysanay gawaarida cuntada, diiwaangelinta codbixiyaasha, iyo Tirakoobka 2020 macluumaadka. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Luulyo 2020 Dutchtown Night Night.
Habeenkii Filimka Marquette Park: Loogu Talo galay Spiderverse
Daawadayaashu waxay ku shireen Guriga Marquette Park Ogosto 22, 2020 Spider-Man: Gudaha Spiderverse Habeenkii ugu dambeeyay ee Filimka Marquette Park ee xagaaga. Waxaan si weyn uga soo qeyb galnay deriska iyo ururada bulshada. Ka aqriso waxbadan oo ku saabsan Habeenkeena Filimada Ogosto 2020.
Habeenka Filimka ee NIC: 42
Deriska ayaa isugu soo baxay goobta baabuurta la dhigto ee Xarunta Hal-abuurka Xaafadda baaritaanka 42 waxaa jilaya marxuum Chadwick Boseman oo loo yaqaanay Jackie Robinson bishii Sebtember 26th, 2020. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Habeenkeenii Filimkii Sebtember 2020.
Sawirka sare by Ben Robinson.
DutchtownSTL.org Habeenada Filimka Dutchtown